ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Sweet Tooth အီဒီယံလေး အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
On, In, Onto, Into
On, In, Onto, Into ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ on, in , onto, into စကားလုံးတွေကို ဘယ်လိုမှန်ကန်အောင်အသုံးပြု ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ဝိဘတ်တွေဖြစ်တဲ့ on နဲ့ in အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ ဆိုကြပါစို့ ကားဘယ်မှာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွနး်အတွက် Where is the car? The car is on the garage. Where is the ball? The ball is on the table. ဒါကြောင့် in, on စကားလုံးတွေဟာ အရာဝတၳုတွေရဲ့နေရာ Location or position ကို ပြောပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါ (သို့) အရာဝတၳုတွေ ဘယ်သွားလဲ ဆိုတာကို ပြောပြချင်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ Destination (ဦးတည်ရာ၊ ပန်းတိုင်) ကိုပြောပြ ချင်တဲ့အခါ on, in ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို to ထည့်ပေါင်းသုံးလိုက်ရပါတယ်။ ဆိုတော့ onto, into ဒီနေရာမှာ တွေးစရာလိုတာက to ကိုထည့်ကိုထည့်ရမာလား ဒီတိုင်းပဲ I putafish on the plate တို့ I put my phone in my pocket တို့ကောသုံးမရဘူးလား ဆိုတာပါ။ ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါမယ် I drove the car into the garage. ဒီနေရာမှာ ကားရဲ့လှုပ်ရှားမှု သွားရာနေရာကို ပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် into ကို သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ I kicked the ball onto the roof. ကျွန်တော် ဘောလုံးကို အမိုးပေါ်ကန်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးဘယ်သွားလဲဆိုတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တာလို့ Onto သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူပ်ရှားမှုနဲ့တည်နေရာဟာ in,on, into,onto တို့ရဲ့အဓိကခြားနားချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစကားတွေနဲ့တွေ့လာရင်တော့ အနည်းငယ်ရူပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ Fall, jump, push, put, throw ဒီစကားလုံးတွေဟာ Main verb ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နှစ်ခုလုံးကိုသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ Joe fell into/in the pool. She threw the books in/into the bin. ဒီလိုလဲသုံးလို့ရပါတယ်။ ခြားနားမှုမရှိပါဘူး။ He jumped on/onto the house. Fall, jump, push, put, throw စတဲ့စကားလုံးတွေဟာသူတို့ရဲ့နဂိုမှုရင်းမှာတည်းက လှုပ်ရှားမှုပါနေပြီးသားဖြစ်တာမို့ in/into, on/onto နှစ်ခုလုံးကို သုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောပြချင်တာက In, on ကို adverb အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ ဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားမှုကိုပြပါစေ to နောက်ကထည့်ပေါင်းစရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါမယ်။ Put your shoes on your feet. တစ်ယောက်က ဝင်ခွင့်တောင်းလို့ဝင်လာပါခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေမယ့် Into မသုံးပါဘူး။ Come in ပဲသုံးပါတယ်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ in, on, into, onto အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု သင်ပေးမယ့် စကားစုလေးကတော့ "Hold your horses" ဆိုတဲ့ စကားစုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ "မင်းရဲ့မြင်းတွေကို တားထား/ ဆွဲထား" ဆိုပြီး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားစုလေးဟာ စကားပုံတစ်ခုလို သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့သလိုတော့ တိုက်ရိုက်ကြီး အဓိပ္ပာယ်မကောက်ရဘူးပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ "နေပါဦး"၊ "စောင့်ပါဦး" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောစကားတွေကို native တစ်ယောက်လို ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို စကားစုလေးတွေကိုလည်း လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
နေ့စဉ် စကားပြောကြတဲ့အခါမှာ ဗန်းစကားတချို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာဆိုရင် အရမ်းလွယ်လွန်းတဲ့ကိစ္စပါကွာ ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်ဆိုရင် "ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာရသလောက်ပဲရှိပါတယ်" ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာရတာလောက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူကိစ္စလေး ဆိုပြီး ဆိုလိုချင်တာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း အဲ့လိုမျိုးအသုံးနှုန်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ "A piece of cake" ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - "I thought I was going to fail the test, but it turned out to beapiece of cake.", ငါစာမေးပွဲကျတော့မယ်ထင်ထားတာ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းဖြေတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ ဒီအသုံးအနှုန်းလေးက တော်တော်လေးအသုံးများတဲ့အတွက် စကားပြောတဲ့အခါမှာ တဖက်လူက ထည့်ပြီးပြောလိုက်တာပဲဖြစ်စေ၊ မိမိဘက်ကပဲ ထည့်ပြောချင်လို့ပဲ ဖြစ်စေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နားလည်လွယ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင် အသုံးအနှုန်းလေးကို စာကြောင်းတွေမှာ စကားပြောတွေမှာ ထည့်သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြတဲ့ Idiom များ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြပြောဆိုရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Idioms များ 1.adaredevil = မိုက်ရူးရဲ လုပ်တတ်တဲ့လူ 2.acrybaby = အလိုမကျတာရှိတိုင်း ဂျီတွန် တက်လွန်းသူ 3.ablack sheep = အားလုံး ကောင်းနေ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူတစ်ယောက်တည်း လူဆိုး ဖြစ်နေသူ 4.aclass clown = အတန်းထဲမှာ ဆိုးလွန်း ၊ အစ အနောက် သန်လွန်းသူ 5.atrouble maker = ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ပြဿနာ ရှာတတ်သူ 6.afitness freak = ကျန်းမာရေး ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးကို အရူးအမူး လိုက်စားသူ 7.acouch potato = ကျန်းမာရေး လုံးဝ လိုက်စားလေ့မရှိပဲ ဇိမ်ကျကျ ခုံကြီးပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း အဆီ ယစ်နေသူ ၊ တီဗီ သာ ထိုင်ကြည့်နေတတ်သူ 8.agym rat = အားကစား ခန်းမကို ချောင်းပေါက်အောင် သွားလွန်းသူ 9. an early bird = မနက် စောစော ထတတ်သူ 10.anight owl = ည ဘက် ညဥ့်နက်တဲ့ အထိ နေတတ်သူ 11.aquitter = အလွယ်တကူ အရှုံးပေးတတ်လေ့ရှိသူ 12.abig cheese = အဖွဲ့အစည်း ၊ နယ်ပယ် တစ်ခုတွင် ဩဇာ အာဏာ အလွန်ရှိသူ စကားပြော အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ချင်ရင်တော့ " မင်း ငါ့ကို ဘယ်လို ထင်လဲ / မြင်လဲ ? " What do you think of me ? လို့ မေးကြည့်လို့ ရသလို ( How နဲ့ မမေးသင့်ပါ ) " ငါ မင်းကို -------- လို့ ထင်တယ် " I think you are ------- . လို့ ဖြေကြည့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ ။
ဒီနေ့ပြောပြပေးမည့် အီဒီယမ် စကားလုံးလေးကတော့ Sweet tooth ဖြစ်ပါတယ်။ sweet tooth ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အရသာချိုတဲ့အသီးအနှံ၊ မုန့်အချို၊ ပေါင်မုန့်ချို၊ သကြားလုံး၊ စတဲ့ချိုတဲ့အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Do you have sweet tooth? လို့မေးတဲ့အခါ အဓိပ္ပာယ်က Do you like to eat sweet food? မင်း ချိုတဲ့မုန့်တွေစားရတာကြိုက်လား လို့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Yes, I haveasweet tooth. I love sweets and I always put sugar in my tea. အင်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကအချိုကြိုက်သူတစ်ယောက်ပါ။ ချိုတဲ့မုန့်တွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်ထဲမှာလဲ သကြားအမြဲထည့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက် က Do you like to eat ice cream? ရေခဲမုန့်စားမလား လို့မေးတဲ့အခါ Of course, I want to eat ice cream. I haveasweet tooth. ဒါပေါ့ ကျွန်တော်ရေခဲမုန့်စားချင်တယ်။ ကျွန်တော်က အချိုကြိုက်သူလေ လို့ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တာဟာ ကိုယ်ကအရမ်းအချိုကြိုက်လို့ရေခဲမုန့်စားမလားမေးခံရခြင်းအပျော်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွင်နေတဲ့သဘောလဲသက်ရောက်ပါတယ်။ ဒီနေရာက Sub နေရာမှာ တခြား sub တွေကိုလဲအစားသွင်းရေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ My boyfriend hasasweet tooth. My friend hasasweet tooth. Mya Mya hasasweet tooth. ဒီ အီဒီယမ်ကနေ နောက်ထပ် ထပ်လေ့လာနိုင်တဲ့စကားလုံးလေးက Crave ဖြစ်ပါတယ်။ I haveasweet tooth so I crave. ကျွန်တော်ကအချိုကြိုက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အရမ်းအရမ်း ကို လိုချင်နေပါပြီ။ လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ crave ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က crave- really really want ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် ကိုအရမ်း လိုချင်နေပါတယ်၊ တောင်းတ တယ် လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဥပမာ I haveasweet tooth. ကျွန်တော်က အချိုအရမ်းကြိုက်တဲ့သူပါ။ So, I crave cookies. ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကွတ်ကီးတွေကို တောင်းတတယ် (အရမ်းစားချင်တယ်) In the morning when I wake up all I can think about is cookies. မနက်ခင် ကျွန်တော်အိပ်ရာနိုးတဲ့အချိန် တွေးမိတာ ကွတ်ကီးတွေအကြောင်းပါ။ လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ကသာ အချိုကြိုက်သူဆိုရင် ဘာကို အရမ်းစားချင်လဲ (သို့) ဘာကိုအရမ်းတောင်းတ လဲ If you haveasweet tooth, what do you crave?
Phrasal Verbs – Fall
Phrasal Verbs – Fall ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ fall နဲ့စတဲ့ phrasal verbs တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ကြိ်မ်ထပ်ပြောပါဦးမယ် Phrasal verbs ဆိုတာကတော့ verb နဲ့preposition တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ verbs ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပေါင်းစပ်လိုက်ချိန်မှာတော့မှုလအဓိပ္ပာယ်ထက် ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ fall out ကနေစကြည့်လိုက်ရအောင် Fall out ရဲ့ရိုးစင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ထွက်ကျသည်၊ လွတ်ကျသည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ When I’m walking down the street, something failed out of my pocket. ကျွန်တော် လမ်းလျှောက်နေစဉ် တစ်စုံတစ်ခု ကျွန်တော့်အိပ်ကပ်ထဲက ထွက်ကျခဲ့သည်။ ဒါကတော့ fall out ရဲ့ရိုးစင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ နောက်ထပ် အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ ရလဒ်၊ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အကျိူးဆက်အကျိူးဆက် (များသောအားဖြင့်ဆိုးဝါးသော) ဥပမာ A big bomb dropped somewhere, and then the fall out for this attack was that many people were left homeless. တစ်နေရာမှာ ဗုံးကျခဲ့ပြီးနောက် အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ဟာ လူအများအပြားကို အိမ်ခြေရာမဲ့ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Fall for ကတော့ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ Fall for something ပဲဖြစ်ဖြစ် Fall for someone ပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ချစ်မိသွားသည် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ I went to the bar. I met this girl. I just fell for her right then and there. ကျွန်တော် ဘားသွားတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူမကိုချစ်မိသွားတယ်။ နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကျတော့ လှည့်စားခံလိုက်ရတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ် ဥပမာ I fell for his trick. ဆိုရင် ကျွန်တော် သူ့လှည့်ကွက်ထဲမိသွားတယ်၊ သူ့လှည့်ကွက်မှာကျဆုံးသွားတယ်လို့ သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် fall for ကို ချစ်မိသွားသည် နောက်တစ်နည်း မမှန်ကန်သည့်အရာကိုယုံကြည်မိသည်လို့ အဓိပ္ပာယ် ယူနိုင်ပါတယ်။ Fall through အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သည် ဥပမာ Last month, I made vacation plans to go to Mandalay. But my boss told me that I have to come into the office because there’s an emergency. So my plans fell through. ပြီးခဲ့တဲ့လက ကျွန်တော် မန္တလေးသွားဖို့အစီစဉ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သူဌေးက အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လို့ရုံးတက်ရမည်ဆိုတာကြောင့် ကျွန်တော့်အစီအစဉ်တွေ ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Fall through ကိုရိုးစင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့လဲသုံးပါတယ်။ ဥပမာ My key fall through the hole. ကျွန်တော့်သော့ အပေါက်ထဲကနေ ကျသွားသည်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ fall နဲ့စတဲ့ phrasal verbs တွေအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Super Awesome Adjectives
Super Awesome Adjective အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ ပိုစမတ်ကျစေဖို့ အရမ်းလန်းတဲ့ Adj (၃) ခုနဲ့ တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ စကားလုံးလေးတွေကို စကားပြောတဲ့အခါ၊ စာကြောင်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသုံးနိုင်ပြီး။ အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့အဲ့ဒီ adj တွေရဲ့ အသံထွက်၊ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ စာကြောင်းတွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲစလိုက်ရအောင်။ ပထမဆုံးပြောပြပေးမည့် စကားလုံးလေးကတော့ ubiquitous ပါ။ သူ့မှာအသံလေးသံရှိတယ်။ အစသံကတော့ you ဆိုတဲ့အသံနဲ့တူတယ် ယူဘစ်ကွစ်တပ်စ် (ဖိသံ) ကတော့ ဒုတိယ အသံထွက်မှာပါ။ yoo - bik'-wi- tuhs အဓိပ္ပာယ်ကတော့ နေရာတကာမှာတွေ့ရသော၊ နေရာတိုင်းမှာ။ (သို့) ပဲခူးဆား လို့အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါတယ်။သူက တစ်ကြိမ်ထက်ပို ပြီး တစ်ခုခု ကိုခဏခဏ တွေ့နေတာမျိုးဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သွားတဲ့နေ၇ာတိုင်းမှာ၊ စတိုင်းဆိုင်မှာ၊ ကော်ဖီဆိုင်မှာ နေရာအနှံ့မှာ တွေ့ရတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ Local coffee shops are ubiquitous in my hometown. မြို့တွင်းကော်ဖီဆိုင်လေးတွေက ကျွန်တော်မြို့မှာဆို နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Computers are becoming increasingly ubiquitous. ကွန်ပြူတာတွေဟာ နေရာတကာမှာ အတော်ကြီးမြင်တွေ့လာရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ He aims to make his product ubiquitous by selling it internationally. သူက သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေ ကို နိုင်ငံတကာမှာရောင်းခြင်းအားဖြင့် နေရာတကာမှာ မြင်တွေ့ရစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ pensive - အတွေးနက်နဲသော နက်နဲတဲ့အတွေး၊ သေချာစဉ်းစား သုံးရမည့်အရာ တစ်ခု၊ လေးနက်တဲ့အရာတစ်ခုခုတွေးတာဖြစ်နိုင်သလို၊ ကံမကောင်းတာ (သို့) ဆိုးဝါးတဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက် အလေးအနက်တွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ She's thinking about her friend in the hospital. She looks pensive. သူမ က ဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့သူမသူငယ်ချင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေသည်။ သူမ နက်နက်နဲနဲတွေးနေပုံပေါ်သည်။ He appeared pensive before speaking again. သူစကားထပ်မပြောခင် နက်နက်နဲနဲတွေးနေပုံပဲ။ နောက်တစ်ခု Conscientious- kon - shee -en - shuhs သူကတော့ အသံလေးသံရှိပါတယ်။ ကွန်ရှိ ယမ်း ရှန့်။ ဖိသံကတော့ သုံးသံမြောက်မှာပါ။ မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ တာဝန်သိတတ်သော၊ အသိဉာဏ်ရှိရှိလုပ်ဆောင်တတ်သော၊ တခြားသူတွေအပေါ်မှာတရားမျှတသောလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ She's very conscientious of her health. သူမ ကသူမရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အသိဉာဏ်ရှိရှိလုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ John is conscientious and hard-working. ဂျွန်က တာဝန်သိတတ်ပြီး၊အကြိုစားသူဖြစ်သည်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ အရမ်းကိုထူးခြားတဲ့adj တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"Keep' Idioms ဒီနေ့သင်ကြားပေးမည့် အီဒီယမ်လေးတွေကတော့ keep နဲ့စပြီး အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားတဲ့အီဒီယမ် (၂) အခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ Keep one's word သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ တကိတည်သည်၊ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို တခြားသူကိုမပြောဘဲထိန်းသိမ်းသည် လို့အနီးစပ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ I always keep my word. Don't worry. ကျွန်တော်က ကတိတည်တတ်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်တော်ဒီစကားကို တခြားသူကိုအသိပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့။ လို့လဲ အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ The best way to keep one's word is not to give it. - Napoleon ဒါကတော့ နပိုလီယံပြောတဲ့စကားလေးပါ။ ကတိတည်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကတိမပေးပါနဲ့ လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ keep one's word ကို ကြိယာအနေနဲ့သုံးတာတွေ့ရမှာဖြစ်သလို စာကြောင်း အခြေအနေအရ one နေရာမှာ My, his, her စသဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Don't trust him. He never keeps his word. သူ့ကိုမယုံပါနဲ့။ သူက ကတိမတည်တတ်ဘူး။ keep in mind - သိထားသည်၊ အမှတ်ရသည်၊ တစ်စုံတစ်ခုကို တွေးသည်။ keep in mind ကိုလဲ စာကြောင်းတွေမှာ ကြိယာအဖြစ်ပဲသုံးကြပါတယ်။ ဒီစကားလုံးလေးကိုတော့ တစ်ခုခုကို သတိရဖို့ လိုတဲ့အခါ အမှတ်ရဖို့လိုတဲ့အခါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ရုပ်ရှင်စပြတဲ့နေမှာ လူများတာကြောင့် လက်မှတ်မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ကျတတ်တဲ့သူချင်းကို စောစောလာဖို့သတိပေးချင်တယ်ဆိုရင် Keep in mind that it's opening night. ဒါက ရုပ်ရှင်စပြမယ့်နေ့ဆိုတာလဲသိထားနော်။ The size of the audience is also an important factor to keep in mind. ပရိတ်သတ် အနည်းအများကလဲ သိထားရမည့်အရေးကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ However, there is one important point to keep in mind. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိထားရမည့်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ There are other factors that companies need to keep in mind. ကုမ္မနီတွေသိထားရမည့် အခြားသောအချက်တွေ များစွာရှိသည်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ "keep" နဲ့စတဲ့အီဒီယမ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
I'd better/I'd better not ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ အသုံးများတဲ့ I'd better နဲ့ I'd better, not အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနူန်းလေးကို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာသုံးလဲဆိုတာပထမဦးဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်။ ဆိုကြပါစို့ ကိုယ်ကနောက်တစ်နေ့မနက် ၈ နာရီမှာစာမေးပွဲဖြေရမယ် ၊ အဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုလဲကြောက်နေတယ်။ ဘာလုပ်သင့်လဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်.. ကိုယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးတစ်ခုခုကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အချိန်မှာဒီအသုံးလေးကိုသုံးပါတယ်။ What should he do? သူဘာလုပ်သင့်လဲ။ 1 Go to bed early.2Party all night.3Watch TV all night. သေချာတာကတော စောစောအိပ်တာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုအခြေနေမျိုးမှာ I'd better အသုံးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ I'd better go to bed early. ကျွန်တော်အိပ်ရာစောစောဝင်သင့်တယ်။ ဒီနေရာမှာကိုယ်တိုင်က စောစောအိပ်ရာဝင်လိုက်တဲ့တာပိုကောင်းတဲ့အကြံဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ။ ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ I'd better နဲ့ခဏခဏပြောနေလို့ အဲ့ဒါကဘာဆိုလိုတာလဲ ဘယ်စကား လုံးကို ကိုယ်စားပြုတာလဲလို့မေးခွန်းတွေရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်။ I'd better ဆိုတာကတော့ I had better ရဲ့အတိုကောက်ပါ။ ဒီအသုံးကို စကားပြောတွေမှာအများဆုံးသုံးကြပါတယ်။I'd better လို့အတိုကောက်ပဲသုံးကြတာပါ။ ဥပမာတွေဆက်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ ဆိုကြပါစို့ဒီနေ့မိုးရွာမယ်ထင်တယ်။ ရာသီဥတုအခြေအနေကသိပ်မကောင်းချင်ဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးကဘာဖြစ်မလဲ။ း။ ထီးပဲယူသွားမလား၊ အိမ်ထဲပဲအိပ်နေမလား စသဖြင့်ပေါ့နော်။ ကိုယ်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်တဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကို လုပ်သင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ I'd better ကိုသုံးပါမယ်။ I'd better bring an umbrella. ကျွန်တော် ထီးယူသွားတာ ကောင်းမယ်။ ထီးမယူသွားရင် ထီးမပါရင် မိုးမိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အကြံကောင်းကိုပြောချင်တဲ့ အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ I'd better leave my house earlier. ကျွန်တော် အိမ်ကစောထွက်တာပိုကောင်းမယ်။ အလုပ်နောက်မကျချင်လို့၊ ကားလမ်းပိတ်မှာကြောက်လို့စသဖြင့် I'd better leave my house earlier. It's late. I'd better go now. နောက်ကျနေပြီ။ ကျွန်တော် အခုသွားတာကောင်းမယ်။ My friends are coming over I'd better buy some food. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ လာနေပြီ ကျွန်တော် မုန့်တွေဝယ်ထားတာကောင်းမယ်။ (ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းလေး ) ဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမှာက I' better, I' better တွေသုံးပြီးတိုင်းမှာနောက်ကလာတဲ့အရာက Verb ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကစာကြောင်းမှာဆို I'd better ပြီးတော့ bring, leave, go, buy စတဲ့ကြိယာတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ I'd better အသုံးလေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။